Hurumende yeMubatanidzwa Yozeya Nyaya yeZuva reSarudzo
Kubvumbi 05, 2011
President Robert Mugabe addresses the nation as Zimbabwe celebrates 30 years of independence from Britain, in Harare, 18 Apr 2010
Makurukota matanhatu ari kumiririra mapato matatu ari muhurumende yemubatanidzwa akatanga neMuvhuro manheru nhaurirano dzakakosha dzekutaura kuti sarudzo munyika dzingaitwe riinhi. Nhaurirano idzi dziri kutarisirwa kuenderera mberi neChitatu.
Vakamirira MDC-T munyori mukuru webato iri, VaTendai Biti pamwe nemutevedzeri wemubati wehomwe, VaElton Mangoma. Zanu-PF iri kumirirwa gurukota rezvemutemo, VaPatrick Chinamasa pamwe negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu VaNicholas Goche, ukuwo MDC-N iri kumirirwa nemunyori mukuru webato iri, Amai Priscilla Misihairambwi Mushonga, pamwe nemutevedzeri wavo, VaMoses Mzila-Ndlovu.
Vatanhatu ava vanonzi vachataurawo nezvehwaro hwesarudzo uho vachapa kuna mutongi gava panyaya yeZimbabwe, uye vari mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, nevatungamiri vemapato ari muhurumende yemubatanidzwa.
Nhaurirano idzi dzakanzi dziitwe neSADC Troika iyo yakasangana muZambia svondo rapera.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti hapana kuwirirana mumusangano uyu pakuti sarudzo dzoitwa riini. Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vanoti sarudzo dzinofanirwa kuitwa gore rino. Asi veMDC vanoti sarudzo idzi gadziitwe gore rinouya.
Mutauriri weZanu-PF, VaRugare Gumbo, vanoti vanoda kuti sarudzo dziitwe gore rino kunyange hazvo vachakamirira kunzwa kubva kunhumwa dzavo dziri munhaurirano.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaMsekiwa Makwanya, vanoti Zanu-PF haifanire kuita zano ndega panyaya yesarudzo.